ဗြိတိသျှဘာသာစကား လေ့လာလိုသူများအတွက်.... — MYSTERY ZILLION
372 Mobile Devlopment
131 other mobile
May 2009 edited June 2009 in Other
ဗြိတိသျှဘာသာစကားလေ့လာလိုသူများ အတွက် လက်တို့လိုက်တာပါ.... သူကတော့ဒီလိုပြောထားပါတယ်...
Hi, and welcome to 1-language.com's online English courses. Here you can find free, quality online courses for learning English, as well asalarge community of language-learners from around the world. Courses are designed to be comprehensive and accessible, so that students wishing to gain immediate communication skills can quickly gain key grammatical concepts and conversational tools, whileamore academic, accuracy-based approach is also met throughasystematic approach to learning English. Many thanks for visiting us, and very best of luck learning English!
တစ်စုံတစ်ယောက် ကကျတော့်ကိုစာသင်ခိုင်းလို့ စိတ်ညစ်တယ်စာသင်ရမှာ အဲ့ဒါကြောင့် အဖော်ခေါ်တာ လာတက်နော်ကျတော်နဲ့အတူတူ.....:D:D:D
ဒီမှာ သွားတက်လေ Bro ...
MZ ညီနောင် site လေးတစ်ခုပေါ့ ...
ကျွန်တော် ပထမကတော့ mmenglish မှာပြောမလို့ပါ ဒါပေမယ့် သူက ခဏနားထားတော့ ဒီမှာပဲပြောတော့မယ်
American Centre (Baldwin Library) Member များခင်ဗျား
အင်္ဂလိပ်စာ ကို နားထောင်လိုသူများ ပြောချင်သူများကို AC မှာရှိတဲ့ American Centre Interfaith Club မှကြိုဆိုပါတယ်။
အဲဒီမှာ ဘာသာရေး နှင့်ပတ်သတ်သည့်အကြောင်းအရာများကို အပတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်း ဗဟုသုတ အနေနှင့် ဆွေးနွေးနေပါသည်။
အချိန်ကတော့ နေ့လယ်2နာရီက နေ4နာရီအထိပါ။ AC Member တွေ ဘယ်လူမျိုးမဆိုတက်ရောက် နားထောင်နိုင်ပါတယ်။
အခန်းကတော့ Room-3 မှာပါ
American Center (Baldwin Library)ကို သွားတာတော ့သွားပေါ့ နော ့... နည်းနည်းတော ့သတိထားပေါ့ဗျာ...
အခြေအနေမကောင်းရင် မသွားနဲ ့ပေါ့... အခုတစ်လော အခြေ အနေတွေ က ကောင်းတာဟုတ်ဘူးဗျ...
(စေတနာလေးနဲ ့သတိလေး ပေးတာပါ)...